न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ भदौ २२ शुक्रबार |
भर्खरै मात्र नेपालको काठमाडौंमा मल्टी(सेक्टरले टेक्नोलोजी र आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको पहल (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सरकारले विमस्टेकको सम्मेलन नेपालका लागि प्रभावकारी भएको बताइरहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने विमस्टेकबाट नेपालले अहिलेसम्म फाईदा लिन नसकेको बताएको छ । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशसरण महतले शिखर सम्मेलनको चर्चा धेरै भएपनि त्यसबाट मुलुकले फाइदा लिन नसकेको बताए । यिनै विषयमा केन्द्रिय रहेर महतसँग गरेको कुराकानको सारसंक्षेप :—
भर्खरैमात्र नेपालमा विमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सम्पन्न भयो । पुर्व परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतमा बुझ्दा यो सम्मेलनबाट नेपालले कत्तिको फाइदा लिन सक्यो ?
मल्टी—सेक्टरले टेक्नोलोजी र आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको पहल(विमस्टेक)ले यसमा सहभागि राष्ट्रहरुको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन् ।
यसमा आवद्ध राष्ट्रहरुसंग जुन स्रोत र साधन छ, त्यसको उपयोगमा हातेमालो गरेर जसरी यो क्षेत्रलाई विकसित बनाउन प्रयास गर्नु पथ्र्या, त्यो गर्न सकिरहेका छैनन । भर्खरै १४ र १५ भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको चौथो शिखर सम्मेलनका बेला यसबारे चर्चा परिचर्चा धेरै भए । तर, यसबाट नेपालले फाईदा लिन सके जस्तो मलाई लागेन । बरु सम्मेलन आयोजना गर्दा घाटा नै व्यहो¥यो होला ।
यसको प्रभावकारिता बढ्न नसक्नुमा कारण के होला ?
विमस्टेकमा भएका बंगालादेश, भुटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्याण्डले यो फोरमलाई प्रयोग गरेर कसरी सामुहिक फाइदा लिने भन्ने बारे प्रभावकारी कार्ययोजना बनाउन सकिरहेका छैनन् । त्यतिमात्रै होइन सकै देशले कसरी फाईदा लिने भन्ने विषयमा धेरै चासो समेत दिएको छैन । जसले यसको प्रभावकारिता बढ्न सकिरहेको छैन ।
खासमा विमस्टेकका राष्ट्रहरुबीच समन्वय भयो भने के—के क्षेत्रमा लगानीको बातावरण निर्माण गर्न सक्छ ?
प्राकृतिक स्रोत साधनका आधारमा हेर्ने हो भने यहाँ रहेका सातै राष्ट्र धनी मध्येमा पर्छन । एउटा देशमा नभएको अर्को देशमा छ, र सबैले प्रकृत्तिको वरदान नै पाएका छन् । तसर्थ व्यापार, लगानी, पर्यटन र पारवहनको क्षेत्रमा विम्स्टेक राष्ट्रहरुले समन्वय गर्दै यसबाट फाइदा दिन र समृद्ध बन्न सक्छन् ।
यदि उनीहरुबीच समन्वय भयो भने के फाइदा हुन्छ ?
७ राष्ट्रबीच सहकार्य भयो भने गर्न नसक्ने भन्ने केहि पनि हुदैन । त्यसमा पनि हाम्रो देश नेपालले त यसबाट ठुलो फाइदा लिन सक्छ । नेपालले विम्स्टेक राष्ट्रहरुसँग सहकार्य गरेर सबैभन्दा ठुलो फाइदा व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ ।
पर्यटन, व्यापार र पारवहनमा पनि फाइदा लिन सक्छ । तर, अहिलेसम्म विमस्टेकले गर्न सुरु गरेको ग्रिड कनेक्टिभिटीमा सम्झौता भएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन । त्यसले कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकिरहेको छैन । त्यसको कार्यबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ, त्यो सबैका लागि सोचनीय विषय हो ।
ग्रिड कनेक्टीभिटी कार्यन्वयन भएमा नेपाललाई के फाईदा हुन सक्छ ?
ग्रिड कनेक्टिभिटी विद्युतसंग सम्वन्धित सम्झौता हो । यो सम्झौता कार्यान्वयन भएमा नेपालले फाइदा लिन सक्ने आधार छ । नेपाल विश्वमै दोस्रो ठुलो पानी भएको देश हो । यहाँ भएको पानीलाई उपयोग गरेर हामीले विद्युत उत्पादन गरेर अरु देशमा बेच्न सक्छौ । तसर्थ अन्य मुलुकले चासो नदिएपनि नेपालले ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पहल र तागेता गर्दै प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले विषेश ध्यान दिन आवश्यक छ ।
विमस्टेक राष्ट्रबीच समन्वय भएमा पर्यटनको विकास गर्न सकिने भन्नु भयो कसरी गर्न सकिन्छ ?
पर्यटनको विकास गर्न सक्ने प्रयाप्त आधार देखिन्छन । विम्स्टेक राष्ट्रबीच रेलवे र सडकमार्ग विस्तार गर्न सक्ने सम्भावना छन्, ति विस्तार भए भने नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकास सहज हुन सक्छ ।
म्यानमार(थाइल्याण्ड जोड्ने रेलवे र सडकमार्ग बन्ने हो भने बौद्ध धर्मावलम्वीहरुलाई लुम्बिनी ल्याउन सकिन्छ । पर्यटनसँग सम्बन्धित अरु धेरै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ, केवल सातै देशमा सत्तामा रहेकाहरुसंग इच्छाशक्ति मात्रै हुन प¥यो ।
सरकारले नेपालमा रेल ल्याउने भन्ने चर्चा परिचर्चा धेरै भएका छन् । यो योजना मुलुकको विकासका लागि राम्रो हो । तर, रेलको परियोजना नेपालमा ल्याउने पुँजी अहिले सरकारसंग छैन । त्यसका लागि पहिला पुजी जुटाउनु पर्छ ।
भारत वा चीन जहाँबाट रेलमार्ग बनाएपनि त्यही देशले बनाइदिनुपर्ने अवस्था मुलुकको छ । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ वेगर बनाइदिदैन । तसर्थ पहिला आफुसंग पुजी निर्माण् गर्ने, त्यसपछि मात्रै परियोजना ल्याउने कुरा गर्नुपर्छ ।
विमस्टेक सम्मेलनमा आएका केहि राष्ट्र प्रमुखले आफ्नै मुलुकबाट आफ्नो सुरक्षार्थ सुरक्षाकर्मी ल्याए, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?
कुनै एउटा फोरम बनाएर सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने मुलुकमा आउदा आफु त्यो मुलुकमा सुरक्षित हुन सक्दैन भनि आफ्नै देशबाट सुरक्षाकर्मी ल्याउनु सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका लागि त्यो भन्दा दुखःद विषय अरु हुन सक्दैन ।
नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षा व्यवस्थाबारे पाहुनालाई विश्वस्त बनाउन नसक्नुको परिणाम त्यस्तो हुन गएको हो । नेपालको सुरक्षा व्यवस्था सक्षम छ । तर, सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आफुहरु सुरक्षामा सुदृढ भएको विश्वास दिलाउन सकेन । नसले राष्ट्रको नै अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा वेइज्जत भयो ।
अहिले सञ्चालनमा रहेको नेपालको परराष्ट्र नीति उपयुक्त छ ?
खासमा हेर्दा नेपालको एउटा निश्चित परराष्ट्र नीति बन्न सकिरहेको छैन । अहिलेको सरकारले स्पष्ट परराष्ट्र नीति बनाउने प्रक्रिया समेत सुरुवात गर्न सकिरहेको छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले परराष्ट्र नीतिका सम्वन्धमा सरकार बाहिर हुँदा एक थरी र सरकारमा हुँदा अर्को थरी कुरा गर्छ । यसले परराष्ट्र नीति राम्रो बन्न सक्दैन । छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरुले परराष्ट्र नीति हेरेर हयोग गर्ने र सम्वन्ध विस्तार गर्ने भएकाले त्यसमा पनि असर पर्न सक्छ ।
प्रसंग केहि बदलौ, तपाईको पार्टी कांग्रेसमा सभापतिलाई दिने अधिकारको विषयमा केहि बहस सुरु भएको हो ?
कांग्रेसमा पार्टी सभापतिलाई दिने अधिकारको विषयमा बहसको सुरुवात भएको सत्य हो । तर, त्यो बहस निस्कर्षमा पुगिसकेको छैन । पार्टीको केन्द्रिय कार्य समिति र मंसिरका लागि घोषणा भइसकेको महासमिति बैठकमा आवश्यक छलफल गरेर सभापतिको क्षेत्राधिकारको विषयमा निर्णय हुन्छ ।
अहिले नै सभापतिको अधिकार घटाउने या बढाउने भन्ने विषयमा एकिन भन्न सक्ने अवस्था देखिन्न । अधिकार बढाउने र घटाउने विषयमा पार्टीको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ, त्यो प्रक्रियामा उपयुक्त देखिए, बढ्ने वा घट्ने हुन सक्छ ।
पहिल्लो समय कांग्रेसमा गुट उपगुट व्यापक मात्रामा मौलाएको आरोप, प्रत्यारोप आउन थालेका छन, के ति सत्य हुन ?
कांग्रेसमा गुट उपगुटको राजनीति गर्ने परिपाटी पुरानै हो । त्यही गुट उपगुटले पार्टीलाई यहाँसम्म पु¥याएको छ । अब पार्टीभित्रको गुट उपगुटलाई कार्यकर्ताले स्विकार गर्न सक्दैनन् । नेताहरुले नै हो गुट चलाउने । अब उहाँहरु सचेत बन्नुपर्छ । अभियान टाइम्सका साथमा ।